Taenan a prosztatitis Általános információ
Linkomicin a cystitis kezelésében
Nép sy ny ady ambony latabatra komonisma dia mampiseho ny fomba vokatry ny roa mpanohitra. Tsy mahita vokatra kokoa tsena sy ny fomba fambolena fifaninanana. Public fitantanana naorina teo amin'ny toby miaramila, satria izay taona maro hatramin'ny ao amin'ny firenena dia ny ady an-trano.
Ao amin'ny toerana maro ny hery Novana imbetsaka isan-taona. Ny fitsipiky ny miaramila rehetra sehatra ara-tsosialy, ara-politika sy ara-toekarena ny fiainana no fototry ny politika ny CPSU b tamin'izany taona. Ny mponina, indrindra any ambanivohitra, tsy afaka hanohitra izany karazana tsindry, ka ny Ny iray amin'ireo lehibe mahatonga ny firodanan'ny "ady kominisma" sy Taenan a prosztatitis fampidirana ny Nép dia loza mitatao ny nandravana an'i fitondrana kominista ny tsy refesi-mandidy.
Amin'ny alalan'ny fanaovana fampitahana ny Nép politika sy ny ady Kominisma, dia Tsara homarihina fa ny fitondrana tsy nanaiky ny Nép. Kominista maintsy ho handefitra noho ny: manala ny incandescent fiaraha-monina; hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana ny antoko eo amin'ny fitondrana; fahafahana mba hitondra ny taniny tamin'ny fitokana-monina iraisam-pirenena; Taenan a prosztatitis ny toe-draharaha ara-toekarena ao amin'ny fanjakana.
Inona no niova, raha oharina amin'ny tamin'ny taona fampihorohoroana? Ny olona fotsiny no nahatsapa ny mety hisian'ny fiainana ara-dalàna: tsy nisy atahorana ny fanafihana miaramila detachments, izay naka ny vary; Ary indray varotra eo amin'ny ambanivohitra sy ny tanàn-dehibe; fifohazana ny hetsika manokana.
Fampitahana ny vokatry ny politika Taenan a prosztatitis Indray mandeha indray, dia mariho fa ny Nép tsy ny tanjon'ny fandaharana ny CPSU b. A malama tetezamita ny singa ny komonisma dia mahomby kokoa fa asehon'ny ny fampitahana. Nép sy ny ady komonisma latabatra vokany Bolshevik politika mazava tsara ny zava-nitranga dia mampiseho ny fomba izay nitarika ho tanteraka vokatra hafa.